Kulankii Baarlamanka KMG oo buuq, fawdo & fara isku taag taag ku soo dhamaaday – SBC
Kulankii Baarlamanka KMG oo buuq, fawdo & fara isku taag taag ku soo dhamaaday
Posted by editor on Julaay 10, 2011 Comments
Kulankii ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho xildhibaanada FKMG Soomaaliya ayaa ku soo dhamaaday fawdo & buuq iyadoo si quman xildhibaanadu aanay u dhegaysan khubadihii Madaxweynaha, Gudoomiyaha Baarlamanka & Ra’isalwasaaraha taasi oo keentey in la xiro kulankasi laguna balamay in maalinimada beri ah la isku laabto.
Mid ka mid ah xildhibaanada Baarlamanka oo ka gaabsadey in magaciisa saxaafada laga sheego ayaa sheegay in xildhibaanadu ay ka careysnaayeen in la hareer marey dastuurkii u yiil dalka, lana burburiyey awoodii uu lahaa baarlamanku.
Xildhibaanada ayaa markii loo qaybiyey nuqulo xambaarsan qodobadii heshiiskii Kampala ayaa waxaa guux & buuq uu ka dhashay xarunta dhexdeeda taasi oo si weyn ay uga caroodeen xildhibaanadu xiliga loo soo gudbiyey qoraalada oo ay u arkaan in uu yahay xili aan mubaasib aheyn oo dib looga soo dhacay.
Gudoomiyaha Baarlamanka KMG Shariif Xasan Sheekh Aadan oo markii buuqu uu batey halkaasi ka hadley ayaa sheegay in xildhibaanadu ay soo akhristaan qoraalada loo qaybiyey, dibna la isagu soo laaban doono maalinimada beri ah, waxaana uu uga digay xildhibaanada inaan loo dulqaadin wax buuq & fawdo ah oo laga dhexsameeyo fadhiyada baarlamanka.
Fadhigii maanta oo ay soo xaadireen 420 xildhibaan ayaa waxaa khudbado ay ku sharaxayaan heshiiskii Kampala ka soo jeediyey Madaxweynaha, Gudoomiayah Baarlamanka & Ra’isalwasaaraha, kuwaasi oo xildhibaanada doonayey inay ka dhaadhiciyaan ansixinta heshiiskaasi.
Qaar ka mid ah xildhibaanada Baarlamanka oo ka dib kulankaasi saxaafada la hadley ayaa sheegay in gabi ahaanba heshiiskii Kampala uu yahay mid aan xalaal aheyn, ayna ka soo horjeedaan, waxaana ay sheegeen inaanay ansixin doonin heshiiskaasi.